आफ्नो प्रेमिका अथवा श्रीमतीको यस अङ्ग कहिले पनि नछुनुस् ! – List Khabar
Home / रोचक / आफ्नो प्रेमिका अथवा श्रीमतीको यस अङ्ग कहिले पनि नछुनुस् !
admin2weeks ago रोचक Leaveacomment 298 Views
एजेन्सी– वेद र शास्त्रमा महिलालाई लक्ष्मीको दर्जा दिइएको छ। यदि स्त्री नहुने हो भने मानव सभ्यता अहिले जहाँ सम्म आएको छ यहाँ सम्म आइपुग्ने नै थिएन। शृष्टिलाई अगाडी बढाउने मात्र नभई मानव सभ्यतामा स्त्री वर्गको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ। हिन्दु धर्ममा त्यसै कारणले गर्दा स्त्री वर्गलाई पूजा गर्ने गरिन्छ।
धार्मिक ग्रन्थहरुले महिलाको विभिन्न अङ्ग पुरुषले छुन नहुने भन्दै उल्लेख गरेको छ। महिलाका विभिन्न अङ्गलाई धर्म शास्त्रले पवित्र मानेको छ। धर्मशास्त्रको अनुसार महिलाको नाभिलाई सबै भन्दा पवित्र अङ्ग मान्ने गरिन्छ। पुरुषले महिलाको नाभी कहिले पनि छुन नहुने धार्मिक विश्वास रहेको छ।
धार्मिक मान्यता अनुसार महिलाको नाभीमा माता काली विराजमान हुने गर्छिन्। पुरुषले महिलाको नाभी छुँदा काली क्रोधित हुने गर्छिन्। कालिको रिसलाई धार्मिक ग्रन्थहरुमा कसैले पनि सहन नसक्ने रिसको रुपमा वर्णन गरिएको छ। यसरी कालीलाई क्रोधित बनाउंदा जीवनमा धेरै दुख आइलाग्न सक्छ।
आफ्नो श्रीमतीसँग हुँदा होसअथवा प्रेमिकासँग हुँदा होस पुरुषले महिलाको नाभी छुन हुँदैन। यस्तो कर्म गर्नाले दुष्परिणाम जीवनभर भोग्न पर्न सक्छ। यस तथ्यलाई धर्म शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ।
Previous एकाउन्टेन्टनै राखेर अपार्टमेन्टमा यौ’ नधन्दा : ढोकामा अत्याधुनिक ल’क कोड, रे’ट पनि कती म’हङ्गो !
Next अ’वै’ध स’म्बन्धबाट ग’र्भ रहेकाले शिशुको घा’टी नि’मो’ठी ह’त्या